GS-3015CEG / GS-4020CEG Okugcwele Kuvaliwe Fibre Laser Cutting Machine nge Exchange - China Dongguan Glorystar Laser
GS-3015CEG / GS-4020CEG Okugcwele Kuvaliwe Fibre Laser Cutting Machine nge Exchange
Kungaba usike amashubhu kanye Ishidi impahla. Futhi elinethebula auto exchange, kungasindisa ukulayisha isikhathi. Izici yomkhiqizo ● Nge umnyuziki oluzungezile ebiyelwe design, ukunciphisa laser ngemisebe futhi ugweme noma yikuphi ukulimala lokukhanda. ● Umbelekela le worktable exchangeable ukulondoloza yokulayisha athula isikhathi, futhi chieve okusezingeni eliphezulu umsebenzi kahle. ● High ngokunembile ukugaya gear kanye igiya yokubeka, umsindo ongaphakeme futhi ngokunemba high. Hlukanisa tube ahlabayo kudivayisi umkhakha Kusebenza Kabanzi asetshenziswa kuzozonke izinhlobo zezimo imikhiqizo metal izimboni ...
Oda Ubuningi :: 1 Piece
Kungaba usike amashubhu kanye Ishidi impahla. Futhi elinethebula auto exchange, kungasindisa ukulayisha isikhathi.
● Njengoba egcwele oluzungezile ebiyelwe design, ukunciphisa laser ngemisebe futhi ugweme noma yikuphi ukulimala lokukhanda.
● Umbelekela le worktable exchangeable ukulondoloza yokulayisha athula isikhathi, futhi chieve okusezingeni eliphezulu umsebenzi kahle.
● High ngokunembile ukugaya gear kanye igiya yokubeka, umsindo ongaphakeme futhi ngokunemba high.
Hlukanisa kudivayisi tube ahlabayo
Kabanzi asetshenziswa kuzozonke izinhlobo zezimo imikhiqizo metal izimboni ezifana ishidi ukucutshungulwa metal, Cookware yokugezela lisebenze, ukukhangisa & izimpawu, ukukhanyisa & hardware, amakhabethe kagesi, izingxenye auto, imishini kanye nezinto zokusebenza, yasendlini lisebenze, ukucacisa izingxenye, nokunye.
Ikakhulu isetshenziswa zonke izinhlobo uthayela izinto okungezona contact ahlabayo okusheshayo, oqoshiwe. futhi imishini, ezifana carbon steel, insimbi engagqwali, ingxubevange, manganese steel, lashukumisa, aluminium, zethusi ipayipi lensimbi ukucutshungulwa, njll
amandla Laser 1000W Ukuze 10000w (Uyazikhethela)
endaweni Ukusebenza 3000 * 15000mm / 4000 * 2000mm
Jikelele power ukusetshenziswa <18KW
Transmission imodi Gear Rack, umshayeli Double
Ukusebenza voltage (ugesi) 380V 50Hz (60Hz)
Previous: Okwezomnotho Fibre Metal Laser Cutting Machine GE-3015
Olandelayo: Okugcwele Kuvalelwe Exchangeable Worktable GS-6015CE
1000w Fibre Laser
1000watts Fibre Laser umsiki
1000watts Fibre Laser System
GS-3015G / GS-4020G Fibre Laser Cutting umshini w ...
Okwezomnotho Fibre Metal Laser Cutting Machine GE ...
Vula Uhlobo Fibre Metal Laser Cutting Machine GS -...
GS-3015G Fibre Laser Cutting Machine For Metal ...